के आजको घटाई डरलाग्दो नै छ की सामान्य करेक्सन, कारोवार रकमले के देखायो ? - नेपालबहस
के आजको घटाई डरलाग्दो नै छ की सामान्य करेक्सन, कारोवार रकमले के देखायो ?
१३ साउन, काठमाडाैं । आज पनि बजारमा बिक्रीकर्ता हावी हुँदा नेप्से परिसूचक ० दशमलव ५२ प्रतिशतले घट्दै बजार बन्द भएको छ । नेप्से परिसूचक १४५४.८९ को विन्दुमा बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक ७ दशमलव ५९ अंकले घट्दा कारोवार रकम १ अर्ब २५ करोड रहेको छ ।
कारोवार रकम भने हिजोको तुलनामा घटेको छ। बजार घट्दा कारोवार रकम घट्नुलाई बिक्रीकर्ता हावी भए पनि बजारमा बिक्रीकर्ताहरु आत्तिएको अवस्था छैन भनेर देखाउँछ।
आज बजार १४६३.८१ को विन्दुमा खुलेकोमा ११ बजेर ०९ मिनेटमा १४६६.०४ को उच्च विन्दु समातेको थियो । त्यस्तै ११ बजेर २८ मिनेट जाँदा १४४९.८६ को न्यून विन्दु समातेको थियो ।
प्रतिरोध २ः १४८० । प्रतिरोध १ः १४६० । टेवा १ः १४५० । टेवा २ः १४१७
👉 आज शेयर बजारमा उतारचडाब कम देखिए पनि विक्रेताको चाप केहि देखिन्छ। आजको बजार प्रवृत्तिले बियरिस मैनबत्तीको चित्र बनाएको छ। यसले क्रेताभन्दा विक्रेताको चाप भएको जानकारी दिएको छ।
👉 दैनिकी अवधिमा “आरएसआई” ६० दशमलब ९२ को बिन्दुमा छ। यो अक्सिलेटरले बजार हालसम्म सकारात्मक क्षेत्रमा रहेको जानकारी दिएको छ ।
👉 “एडिएक्स” र जोड /बिजोड “डाइरेक्सनल इन्डेक्स”हरुले बजारमा क्रेताको चाप रहेको जानकारी दिएको छ।
👉 “अन ब्यालेन्स भल्यूम” ले निश्चित रुपमा केहि जानकारी दिएको देखिन्दैन ।
नेप्से बढेमा पहिलो प्रतिरोध १४६० को क्षेत्रमा पाउने देखिन्छ र घटेमा पहिलो टेवा १४५० को क्षेत्रमा पाउने देखिन्छ।
आज नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक १० करोड ३५ लाख बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ । मिर्मिरे लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक ९ दशमवल ९४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै पोखरा फाईनान्सको शेयर मूल्य सर्वाधिक ५ दशमलव ०३ प्रतिशतले घटेको छ।
आज फाइनान्स र म्युचअल फण्ड उपसुचकमा मात्र वृद्धि देखिएको छ भने अन्य सबै उपसुचकमा गिरावट आएको छ। आज ट्रेडिङ्ग उपसुचकमा सर्वाधिक गिरावट आएको छ।
शेयर बजारमा ४२ अंकको पहिरो आउनुको यस्तो छ कारण
सम्पूर्ण उपसुचक वृद्धि हुँदै, लगानीकर्तालाई खुशी बनाउँदै बन्द भयो यो साताको बजार
सम्पूर्ण उपसुचकमा गिरावट आउँदा नेप्सेमा पहिरो, प्राविधिक बिश्लेषणले के देखायो ?
आज नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले ओरोलो
Previous articleमहाधिवेशनको प्रक्रिया आरम्भपछि गरिएको कारवाही रोक्न सभापतिहरुको माग
Next article१५ दिनभित्र सुचना अधिकारी तोक्न सबै सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन, २४ जनालाई जरिवाना
काठमाडौंमै संक्रमित बृद्धको मृत्यु
यो तीजमा शान्तिप्रिय र सरिताको ‘रातो सारी लरक्कै’